Al-shabaab oo degmada Jilib kusoo bandhigtay askar kasoo goostay Jubbaland (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Al-shabaab oo degmada Jilib kusoo bandhigtay askar kasoo goostay Jubbaland (SAWIRO)
Kooxda Al-shabaab ayaa degmada Jilib ee gobolka J/dhexe kusoo bandhigay nin sarkaal ah iyo 3 askari oo ay sheegeen inay kasoo wada goosteen ciidanka maamulka Jubbaland.
Afartaan nin oo ay soo bandhigeen Al-shabaab ayaa sida la sheegay waxaa ku jira nin lagu magacaabo Yaasiin Nuur Fiilo oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka howlgala deegaanada maamulka Jubbaland.
Yaasiin Fiilo oo meel fagaare ah kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay sababta ay usoo goosteen ay tahay, kadib markii ay u adkeysan waayeen dhibaatada iyo gumeysiga ay dowladda Soomaaliya ku heyso shacabkooda.
Ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay maamulka Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya, kaas oo ay kaga hadlayaan afartaan nin ee ka tirsanaan jiray ciidankoodi oo usoo goostay dhinaca Al-shabaab.
Dhinaca kale, warar hoose oo ay warbaahinta Bulshoweyn heleyso ayaa sheegaya in nimaankaan usoo goostay dhinaca Al-shabaab ay ahaayeen kuwo markii horeba si hoose ula shaqeyn jiray Al-shabaab, balse markii uu tuhun soo galay ay door-bideen inay soo baxsadaan.